लेख/बिचार – Nepali News नेपाली समाचार
लोक-संगीतको खुल्ला आकाशमा चम्कंदै गायिका शान्ती श्री
मोहन गोले तामाङ केही बर्ष अघि नाम नलिउँ सिन्धुली जिल्लामा एकजना शिक्षकले आफूले पढाउँदै गरेको छात्रालाई नै पेट बोकाए । पछि गाउँमा हल्लाखल्ला चल्यो । कसको पेट हो ? भनेर सोधिखोजी हुँदा उसैलाई पढाउने शिक्षकको हो भन्नेमा पुग्यो । गाउँलेले समातेर छात्रा शिक्षकलाई जिम्मा लगाए । शिक्षकको दुर्नाम भयो । सबैले सोध्थे– मास्टर साव, तपाईले >>>
-✍️सञ्जय याक्खा नेपाली राजनीति कालखण्डमा २०२८/२९ झापा आन्दोलनले चरम रुप लियो । शासकहरुले प्रजातन्त्रलाई कुल्चिएर ताण्डप मच्चाउनु थाले त्यसको फलस्वरुप नेपालमा बामपन्थी नेकपा एमालेको उदय भयो । परिवर्तन संस्थागत गर्ने राजनिती एजेन्डा अघिबढने क्रममा वि.सं. २०३५ साल चैतमा अपदस्त प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएको निस्किएको सानो शान्तिपुर्ण जुलुस लैनचौर स्थित पाकिस्तानी खुतावासमा विरोध पत्र >>>
अनिस तामाङ । जब जब तराईमा विकासको लहर चल्छ मधेसीहरु समृद्धि नेपालको सपना देख्न थाल्छन, तिम्रो मनमा उकुसमुकुस पैदा हुन्छ तिम्रो इतिहास पनि त्यस्तै छ । चाहे सरकारमा हुदा होस चाहे सरकार बाहिर हुदा मधेसी जनताको रगत यो माटोमा बलि चढाएर होली नखेले सम्म तिम्रो राक्षसीपनमा अलिकति नि कमि नआएको महसुस सबैले गरेका छन् । >>>
-भानुभक्त आचार्य । अघिल्ला चुनावहरुभन्दा यसपाली पत्रकारहरुको चुनावको चर्चा अधिक छ । अहिले भइरहेको यो चर्चा पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवासुविधा वा प्रेस स्वतन्त्रतामा आइपरेको व्यावधानलाई चिर्नका लागि भएको होइन । राजनीतिक दलआबद्ध प्रेस क्लबहरुले सिफारिस गरेअनुसार महासंघले नयाँ सदस्यता अनुमोदन तथा वितरण नगर्दा भएको किचलोले उत्पन्न भएको हो । परिणाम स्वरुप, छ दशक >>>
नारी एक आमा हुन, एउटा आमाले नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको एक शिशु समयको वेग संगै हुर्किदै उ शारिरिक र मानसिक रुपमा पुर्ण सक्षम हुन्छ अनि भुल्छ उसले आफ्नो वितेका पलहरु, अनि सोच्छ नारी कमजोर हुन्छ, नारी अबुझ हुन्छन हर काममा नारीहरु पुरुष जतिको क्षमतावान हुदैनन, उसले कति छिट्टै भुलिसकेका हुन्छ कि उ जति आफुलाई >>>